I-HEMSEDAL- IKHABHINI YEZEMIDLALO YAMHLANJE ENEMIGANGATHO EPHAKAMILEYO
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguAndreas
Wamkelekile kwi "Sportshytta!"
Kwindawo yekhabhinethi esekwe kakuhle iHemsedal Golf Alpin uya kufumana le khabhathi intle yezemidlalo enayo yonke into oyifunayo ukuze uhlale ungalibaleki. Lo mmandla waziwa ngokuzola kunye nomoya opholileyo kunye neendawo ezingqongileyo ezintle ezinamahlathi epine. Intaba eyomeleleyo yentaba ilele njengendawo engasemva entle ngasentshona kunye neHydnefossen entle (i-160 yeemitha zamanzi). Indawo nje onokuthi uyitshaje kwakhona iibhetri zakho, kwaye uqinisekisiwe ukuba ufuna ukubuyela kuyo!
Ukuhamba umzuzu omnye ukusuka kwikhabhathi uya kufumana indawo yegalufa ye-Hallingdal enemingxuma eli-18 kuphela, kwaye indawo esembindini ithetha ukuba ukuhambo olufutshane lwemoto ukusuka kuzo zonke izibonelelo zeHemsedal kunye neGolsfjellet ekufuneka uzinike, nokuba ungumntu othanda ukuhamba intaba, umdlalo fisherman, umzila webhayisikile okanye ufuna ukuzama enye ezingenakubalwa nezinye izinto ezininzi kule ndawo has ukunikela kwi amaxesha ehlotyeni bawe.
I-terrace ebanzi ye-30 sqm inelanga ukusuka kusasa ukuya kusihlwa kwaye imema ngamaxesha amaninzi amnandi ngaphambi nangemva kosuku olusebenzayo. Ikhabhinethi ixhotyiswe kakuhle, kwaye inayo yonke into efunekayo ukuze uhlale kamnandi- inendawo eninzi yosapho olwandisiweyo kunye neqela labahlobo.
ULWAZI OLUBALULEKILEYO LWEgumbi LOKULALA:
Igumbi lokulala eli-1 linebhedi ephindwe kabini.
Igumbi lokulala eli-2 lineebhedi ezimbini ezingatshatanga ezinokuguqulwa zibe yibhedi ephindwe kabini.
Igumbi lokulala eli-3 lineebhedi ezimbini zomntu omnye ezinokuguqulwa zibe yibhedi ephindwe kabini.
QAPHELA! Ukutshaja imoto yombane yasimahla ibandakanywe kwixabiso lokurenta!
Umrhumo oluhlaza kwiGolf Alpin Golf Course xa urenta "Golfhytta":
1 imali eluhlaza yasimahla (550, - ngosuku)
1/2 ixabiso omnye 3 abantu (225, - ngosuku umdlali ngamnye).
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Gol